म्याग्दी कांग्रेसले को-कसलाई उम्मेदवार सिफारिस ग-यो ? - News Portal of Global Nepali
म्याग्दी कांग्रेसले को-कसलाई उम्मेदवार सिफारिस ग-यो ?
म्याग्दी । आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस म्याग्दीले उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नेको नामावली संकलन गरी काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएर पार्टी केन्द्रीय समितिमा रिफारिस गरिएको हो । काँग्रेस म्याग्दीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा पार्टी सभापति खमवीर गर्बुजा र युवा नेता अमृतमान शेरचनको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यसअघि जिल्लाबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संघ र प्रदेशका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सम्भावित उम्मेदवारको नामावली सिफारिस गरिसकेको छ भने उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीको बैठक आजदेखि बेनीमा शुरु भएको छ ।
यही असोज १६ गतेदेखि बसेको जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि २६ नाम सिफारिस गरेको हो । सोअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि पूर्वराज्यमन्त्री गोपालजीजङ्ग शाह, जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओली, महाधिवेशन प्रतिनिधि यामबहादुर केसी र पूर्वपार्टी उपसभापति वीरबहादुर ओलीको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिकमा सभापति प्रेमप्रकाश ओली, पूर्वराज्यमन्त्री शाह र वरिष्ठ अधिवक्ता डा नवराज गौतमको नाम सिफारिस गरिएको बताइएको छ । शाह र ओलीमध्ये एक जना प्रत्यक्षमा लड्ने र एक जना समानुपातिकमा जाने आन्तरिक सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।